Iindawo ezili-12 ekufuneka zithintelwe ngo-2018 ngokwe-CNN | Iindaba Zokuhamba
Iindawo ezili-12 zokuphepha ngo-2018 ngokwe-CNN
Maria | | Izaziso, Uhambo
Kutshanje i-CNN ipapashe uluhlu lweendawo ezili-12 ekufuneka abakhenkethi baziphephe ngexesha labo leholide ngo-2018. Ngaphandle kwedatha elungileyo eyabhaliswa yiBarcelona ngo-2016 njengesixeko sabakhenkethi ngenxa yabakhenkethi abazizigidi ezingama-34 ababenayo ngaloo nyaka, kuyamangalisa ukuba kuluhlu kunye nezinye iisayithi ezinjengeTaj Mahal, iGalapagos Islands okanye iVenice. Yintoni ekhokelele i-CNN ukuba ingacebisi ukutyelela ezi ndawo?
5 Iziqithi zaseGalapagos
Ingosi yeendaba yaseMelika iphikise ukuba ingxinano sesona sizathu sokungayindwendwela iBarcelona kwi2018, njengoko ineziphumo ezibi kwisixeko nakubemi bayo.
Bakwalatha kwi-phobia yabakhenkethi ethe yatyhilwa e-Barcelona phakathi kwabemi abathile ababonisa ukungoneliseki kwabo kukhenketho oluninzi ngokusebenzisa igrafiti kunye nemiboniso. Ngapha koko, bayalumkisa ukuba abaqhankqalazi bathabathe unxweme lwaseBarceloneta ngo-Agasti ophelileyo ukuyokukhalimela ukungaziphathi kakuhle kwabakhenkethi.
Ngokunjalo, i-CNN ichaza indlela uqhankqalazo lweBarcelona olonyuke ngayo ngenxa yokunyuka kwamaxabiso erenti ngenxa yeenkonzo ezinje ngeAirbnb, nto leyo eyenza kubenzima kakhulu kwabanye ukufumana indawo yokuhlala abanye bebanyanzela ukuba bashiye amakhaya abo ngenxa amaxabiso aphezulu kakhulu. Bakwakhankanya nendlela iBhunga lesiXeko elazama ngayo ukusombulula ingxaki ngokuwisa umthetho othintela inani leebhedi zabakhenkethi.
Njengenye indlela yokuxinana kweBarcelona, ​​bacebisa ukuba bandwendwele iValencia ngonyaka we-2018 kuba sisixeko esibonelelwa ngesisu kunye nenkcubeko sinokukhuphisana nenkunzi yaseCatalan kodwa siphumle kancinci.
Ukuxinana sisizathu sokuba i-CNN ibandakanye iVenice kolu luhlu. Nyaka ngamnye bamalunga nezigidi ezingama-40 abantu abatyelela esixekweni. Ukuhamba ngamandla kwabantu abaninzi baseVenetian kuya kuba neziphumo ezibi kwizikhumbuzo zesixeko, umzekelo, iSt.Mark Square.
Ngapha koko, kwiinyanga ezidlulileyo urhulumente wasekhaya uthathe isigqibo sokwenza amanyathelo okulawula ukufikelela kwesi sikwere sihle kwi-2018 ngokusebenzisa irobhothi elawula ukungena kwendawo kunye nokumisela iiyure zokundwendwela ekuyimfuneko ukugcina indawo. kwangaphambili.
Lo mgaqo mtsha uya kuncedisa kwirhafu yabakhenkethi esetyenziselwa ukutyelela iVenice kwaye iyahluka ngokuxhomekeka kwixesha lonyaka, indawo ekuyo ihotele kunye nodidi lwayo. Umzekelo, kwisiqithi saseVenice, i-euro e-1 ngenkwenkwezi nganye ngobusuku ngabunye ihlawuliswa ngexesha eliphezulu.
Ngenxa yokunyuka kweendwendwe ezithe zafunyanwa sisixeko saseCroatia ngenxa yoluhlu lwe 'Game of Thrones', abasemagunyeni kuye kwafuneka baseke isabelo sokutyelelwa mihla le ukunciphisa ukuxinana ukusukela, ngo-Agasti 2016, iDubrovnik yamkela abakhenkethi abayi-10.388 kwinto enye usuku, oluchaphazele kakubi abahlali abahlala kwindawo eyaziwayo eneendonga kunye namatye ezikhumbuzo. Ngapha koko, isixeko silinganise inani labantu abanokukwazi ukunyuka iindonga zenkulungwane ye-4.000 mihla le ukuya kwi-XNUMX.
Kwakhona, ukuxinana kwabantu sisizathu sokuba i-CNN ingacebisi ukutyelela iDubrovnik ngo-2018. Endaweni yoko icebisa iCavtat, idolophu entle kunxweme lweAdriatic enamabhishi amakhulu ukubaleka izihlwele.
Ngokutyelelwa kwezigidi eziyi-1,4 ngo-2016 kunye nomndilili wabantu abangama-5.000 XNUMX ngosuku, uMachu Picchu wayezakufa ngempumelelo, into eye yanikwa ingxelo yi-CNN. Ukuthatha le datha, i-Unesco ibandakanya inqaba endala kuluhlu lweeNdawo ze-Archaeological ezisengozini ngenxa yokuxinana kwabakhenkethi kwaye, ukuthintela ububi obukhulu, urhulumente wasePeruvia kufuneka athathe amanyathelo okukhusela.
Abanye babo babeza kuseka iishifti ezimbini ngosuku ukufikelela kwiMachu Picchu kwaye bakwenze ngesikhokelo kumaqela abantu abalishumi elinesihlanu kwindlela emakwe. Ukongeza, unokuhlala kuphela kwinqaba ixesha elilinganiselweyo kunye nokuthengwa kwetikiti. Utshintsho oluphawulekayo kuthathelwa ingqalelo ukuba kude kube ngoku nabani na unokuzula ngokukhululekileyo emanxuwa kwaye ahlale ixesha elide njengoko befuna.
Njengokuba kwenzeke kuMachu Picchu, Iziqithi zeGalapagos zikwabandakanyiwe kuluhlu lweLifa leMveli elisengozini ngenxa yokuxinana nokungabikho kwamanyathelo ekhonkrithi okulawula ixesha elithile.
Ukugcina enye yezona ndawo zintle zendalo ehlabathini, urhulumente wase-Ecuador wavuma uthotho lwezithintelo ezinje: ukubonisa itikiti lokubuya ngenqwelomoya, ukubekelwa ihotele okanye ileta yesimemo evela kubahlali balapha kunye nolawulo lwekhadi .
Iziqithi zeGalapagos zezinye zeendawo apho i-CNN ingacebisi ukuya kwi-2018 kwaye endaweni yoko iphakamisa iiBallestas Islands zasePeru, kunxweme lwePasifiki, apho ungonwabela imbonakalo entle yomhlaba kunye nezilwanyana zasekhaya.
I-Antarctica, iCinque Terre (e-Itali), i-Everest (Nepal), iTaj Mahal (eIndiya), iBhutan, iSantorini (iGrisi) okanye i-Isle of Skye (eScotland), Bazalisa uluhlu olunikezelwa yi-CNN ikwajongana nezizathu zokusingqongileyo okanye ukuxinana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Uhambo » Iindawo ezili-12 zokuphepha ngo-2018 ngokwe-CNN
I-CR7 izakuvula iihotele ezintsha eMarrakech, eMadrid naseNew York
Yintoni ongayibona kwisixeko saseOxford